Home Sababta Xaqiiqooyinka Taariikhda Nolosha Ee Loogu Tala galay
Taageerayaasha Kubadda Cagta, akhriska ku saabsan Biography ee ciyaartoy kubada cagta inta badan saameyn ku yeeshaan, dhiirigeliyaan, oo dhiirogeliyaan. Tani waa sababta xaqiiqadeena Kubadda Cagta ee loo yaqaan 'Life Untold Biography' ay u jiraan !!
Kubadda cagta sida aan ognahay waligeed ma geli karto suulinta. In kasta oo habka ciyaarta lagu ciyaarayay uu soo ifbaxayey sanadihii la soo dhaafay, haddana sheekooyinka xiisaha leh ee aan waligood iska saarin ayaa ka soo dhalaali doona xusuusta kubbada cagta afarta facood.
Sheekooyinka inta badan ka dhex dhaca ciyaartoyga, maamulayaasha iyo aqoonta sare ee isboortiga ayaa ah kuwa xamaasad leh, taabanaya, maanka ku haya iyo dabcan, aragti kasta oo wanaagsan oo akhristayaasha, dhagaystayaasha iyo daawadayaasha ay isku halleyn karaan si ay u sharxaan dareennada xun ee sheekooyinka noocan ah ku dhisaan maankooda.
Lifebogger wuxuu soo bandhigayaa sheekooyin naxdin leh oo ku saabsan ciyaartoy kubada cagta, maamuleyaal iyo aqoonyahano. Dhibcaha Sawirka: LB.
Arrin muhiim ah oo ka dhigaysa sheekooyinka inay curyaamiyaan been ayaa ah xaqiiqda ah inaysan dib uga dhicin dareenka buugaagta dhijitaalka ah ee xirfadlayaasha ah sida Lifebogger taas oo ku xeel dheer suugaanta iyo farshaxanka sharafta leh ee qorista kubada cagta xudunta u leh taariikh nololeedka.
At Lifebogger, Waxaan ku faanaynaa nafteenna inay tahay isha dijitaalka ah ee xirfadeed ee sheekooyinka runta ah iyo kuwa aan la sheekaysan ee kuwaas oo qayb muhiim ah ka ah taariikh nololeedyada xiisaha leh ee aan ku soo bandhignay maamulayaasha garsoorayaasha kubbadda cagta isla markaana aqoonyahanno adduunka oo dhan ah.
Lifebogger waa isha kaliya ee dhijitaalku ka yahay sheekooyinka kubbadda cagta runta ah. Astaanta Sawirka: LB.
Marka la soo koobo, maqaalkani wuxuu ujeeddadiisu tahay inuu siiyo dhagaystayaasha fikrad dhameystiran oo ku saabsan waxa aan ku sameyno annagoo soo bandhigeyna xaqiiqooyin aan hore loo arag ama taariikh nololeed ah oo kubbadda cagta, maamuleyaasha iyo mas'aladaha hoos yimaada cinwaanada akhriska wanaagsan.
Maxay sheekooyinka Carruurnimada - Maareeyayaasha kubada cagta ee aan ciyaarin kubbada cagta
Kubada cagta waligeed ma joogsato inay soo saarto waxyaabaha ka reeban waxyaabaha la aaminsan yahay iyo fikradaha. Mid ka mid ah fikradaha noocaas ah ayaa dhigaya in shakhsiyaadka aan weligood ciyaariin kubbadda cagta xirfad ahaan - ma sii xumayn karo - inay noqdaan maamulayaasha kubbadda cagta ama - ugu fiicnaanshada - si wanaagsan ugu maareeyaan awoodda maamul.
Sida aaminsanaanta hore loo soo sheegay ay umuuqdeen inay noqdeen xaqiiqooyin cilmiyaysan oo la aasaasay, Maurizio Sarri ayaa ka soo muuqday ifafaalaha uu ku bilaabayo mustaqbalkiisa tababarenimo ee 1990s isagoo la jooga kooxda heerka hoose ee AC Sansovino halka Andre Villas-Boas wuxuu bilaabay kaaliye tababare ahaan Porto dabayaaqadii 1990's.
Andre Villas-Boas iyo Maurizio Sarri kuma aysan ciyaarin kubada cagta heer xirfadeed ka hor inta aysan bilaabin tababarka. Dhibcaha Sawirka: WAGNH.
Sababta Xaqiiqda Nolosha ee Taariikh Nololeedkii Aan La Qarxin - Ciyaartoyda Kubadda Cagta Kuwaas Oo Ka Cabsi Galiyay Maamulayaasha
Cabsida badanaa waa wax aan macquul aheyn isboortiga kooxda gaar ahaan kubada cagta halkaasoo ciyaartoydu ay saameyn ku yeeshaan “kuleylka waqtiga”. In kasta oo jahwareerka mararka qaarkood ama dabeecad xumada ay ciyaartoydu muujiyaan inay ka soo horjeedaan kuwa ka soo horjeedda loo diido inay tahay taatiko ahaan “layliyo xirfadeed", isku mid lama dhihi karo markii garsoorayaasha kubada cagta ay kululeeyaan maamulayaashooda.
Jamaahiirta kooxda Barcelona si dhaqso ah uma ilaawi doonaan khilaafkii udhexeeyay macalinkii hore ee kooxda Pep Guardiola iyo hore Zlatan Ibrahimovich iyada oo aakhirkii sheegeysa in Guardiola uu laba jeer oo keliya la hadlay isaga bilaha 6. Khilaaf aad u adag, taageerayaasha Real Madrid ayaa ku kala qeybsamay taageerada Iker Casillas or Jose Mourinho Markii ay labada nin ka soo horjeedeen waxa uu tababarahu u arkay inuu khiyaanay goolhayaha reer Spain.
Zlatan Ibrahimovich iyo Iker Casillas ayaa labadoodaba welwel weyn ka qabay tababarahooda hal mar ah. Dhibcaha Sawirka: LB.
Intaa waxaa dheer, inbadan ma xasuustaan ​​taas David Beckham dhaqan xumo ayaa ka dhacday Manchester United mar uu hogaaminayay tababarahaas Alex Furgeson si aad u garaacdo kabaha suurstar-ka. Dharka kabaha ayaa si sax ah wejiga u taabtay Beckham, waana dhacdo kadhacey heshiiskiisii ​​ugu dambeeyay ee Real Madrid 2003.
Sababta Xaqiiqda Nolosha ee Taariikh Nololeedkii Aan La Qarxin - Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee leh Kaararka Casaanka Badan
Kuwa wax qoraaya ee noocani waxay kala yihiin difaaca adag ee la dagaallamaya ilaa kuwa khad qadka dhexe ka ciyaara iyo sidoo kale ciyaartoy qurux badan oo awood u leh rabshadaha oo soo bandhiga xanaaqa xanaaq yar. Sidaas darteed, waxay hayaan diiwaanno anshax xumo ah oo ay ku caddeeyeen ruqsadaha kaararka cas.
Si aad ugu bilowdo isdifaacyada adag ee adag, Sergio Ramos kaalinta koowaad ee shaxda maadaama uu leeyahay celcelisyada ugu badan ee taariikhda La Liga. In kasta oo uu hawlgab noqday Steven Gerrad safka mid ka mid ah xiddiga qadka dhexe ee casaanka badan kaarka hoose ee ka soo degay dariiqa Anfield markii ugu horreysay ee lagu maydho.
Steven Gerrard iyo Sergio Ramos ayaa ka sarreeya liiska ciyaartoy badan ee casaan la siiyay. Dhibcaha Sawirka: LB.
Hor u dhaqaaq ayaan leenahay Diego Costa Qaab ciyaareedkiisa qaawan ee ciyaarta marna ma joojiyo inuu dhib ku keeno garsoorayaasha meel kasta oo uu aado. Xaqiiqdii, waxaa loo arkaa shil inuu sugayo si ay u dhacaan markasta oo uu isku dayo inuu dib ula soo wareego difaacii.
Sababta Xaqiiqda Nolosha ee Taariikh Nololeedkii Aan La Qarxin - Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Dhaliilayaal ah
Marka laga tago maal-gashiga badan ee tababarka si ay u bartaan farshaxanka ciyaar-gacmeedka quruxda badan, ciyaartoydu qaarkood waxay mareen masaafo dheeri ah si ay uga farxiyaan taageerayaasha iyaga oo barta luqadda kooxaha ay martida u yihiin. Dadaalku kaliya kama uusan dhigin garsoorayaasha kubada cagta inay sifiican ula mid ahaadaan bulshada dhexdeeda laakiin waxay u dhigeen inay yihiin kuwa ugu cadcad doorka maamulka marka ay howlgab noqdaan.
Iyada oo aan wax badan la aqbalin, ciyaartoy yaqaan luqado badan waxaa ka mid ah goolhaye Peter Cech kaas oo caawiya dalkiisa Czech oo ku hadla Isbanish, Jarmal, Faransiis iyo Ingiriis. Dhiniciisa, Henrikh Mkhitaryan si faseex ah ugu hadlaa Armeniyan, Bortuqiis, Faransiis, Talyaani, Ruush, Ingiriis iyo Jarmal.
Ugu dambeyntii ma hubo in ugu yaraan yahay Romelu Lukaku oo caddaynaysa inuu yahay muuqaalka saxda ah ee “hyperpolyglot maadaama uusan ku hadlin wax ka yar luqadaha 8. Waxay ka mid yihiin Faransiis, Lingala, Dutch, Belgium, Kongo, Swahili, Isbaanish, Ingiriis, Bortuqiis iyo Jarmalka.
Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan iyo Peter Cech waa polyglot cajiib ah kubada cagta. Dhibcaha Sawirka: LB.
Sababta Xaqiiqda Nolosha ee Taariikh Nololeedkii Aan La Qarxin - Ciyaartoyda Kubadda Cagta iyo Maamuleyaasha Qaatay Shahaadooyinka Tacliinta Sare
Qaabka ay qaar ka mid ah garsoorayaasha kubada cagta u gartaan, ka qeyb qaadashada firfircoon ee kubada cagta ma horjoogsato helitaanka heerar sare oo aqooneed, fikrad wax soo saar leh taas oo ku kaliftay inay u sii socdaan isqorista shahaadooyinka kuleejka isla markaana qalin jabiyaan barnaamijyadooda.
Ciyaartoy Talyaani ah Giorgio Chiellini wuxuu ka galay liiska ka qalin jabinta Jaamacadda Turin oo uu ku qaatay shahaadada Master Degree ee Maamulka Ganacsiga. Waayo Juan Mata, haysashada laba darajo - mid suuqgeyn iyo mid kale oo sayniska isboorti - kaliya kuma filna. Wuxuu leeyahay dano ah barashada cilmu-nafsiga waqtiga qorista.
Qaybta maamulayaasha, miyaad ogtahay taas Frank Lampard waxay shahaado ka haysataa Latin halka Vincent Kompany shahaadada mastarka ee maareynta ganacsiga ka qaadatay Isbahaysiga Ganacsiga ee Manchester Manchester? Xaqiiqdii cayaartoyda kubada cagta magacooda maheli karaan magac sirdoon, laakiin ciyaartoygan aan kor ku soo xusnay iyo maareeyayaasha ayaa si weyn ugaqaybqaatay isbedelka sheekada.
Maskaxda oo leh hibo. Laga soo bilaabo LR Giorgio Chiellini, Vincent Kompany, Frank Lampard iyo Juan Mata, Credits Image: LB.
Sababta Xaqiiqda Nolosha ee Taariikh Nololeedkii Aan La Qarxin - Milkiilayaasha Naadiga Ugu Taajirsan
Horyaalka Ingiriiska ayaa noqotay garoon lagu ciyaaro bilyaneerka oo iibsada naadiyada isla markaana ku kala bixiya lacagtiisa bidix, midig iyo bartamaha. Illaa Yurub waa dan laga leeyahay, milkiilaha kooxda ugu taajirsan waqtiga qoraalka waa Sheikh Monsour, ninka iibsaday Man city.
La kulan Sheikh Monsour- Milkiilaha kooxda ugu qanisan England. Ku mahadsanid Guardian & Anigand
Sheekh wuxuu kaloo leeyahay milkiilaha kooxda Emiratiti oo ah kuxigeenka ra'iisul wasaaraha Imaaraadka, wasiirka madaxtooyada iyo xubin ka tirsan qoyska boqortooyada Abu Dhabi. Waa walaalkiis kala bar Madaxweynaha UAE, Khalifa bin Zayed Al Nahyan.
Kadib ninka ugu qanisan kubada cagta ayaa yimid Yuusuf Joe Lewis bilyaneer caan ah oo aan caan ku ahayn Ingiriiska oo ah milkiilaha Spurs.
Joe Lewis (bidix), milkiilaha Spurs wuxuu ka mid yahay ragga ugu taajirsan Boqortooyada Ingiriiska
Adiga waad maqashay Danial Levy, laakiin Joe Lewis waa ninka ka dambeeya Spurs waana kan Levy u magacaabay gudoomiyaha kooxda.
Ugu dambeyntiina Roman Abramovich, oo si fiican loogu yaqaan bannaanka Russia inuu yahay milkiilaha kooxda Chelsea FC Waa nin muran badan dhaliyay, kaasoo u beddelay Chelsea koox Premier League ah isla markaana noqotay koox weyn oo reer Yurub ah.
Inta badan taageerayaasha Chelsea gudaha England iyo daafaha adduunka, Abramovich ayaa cadeeyay inay macquul tahay iibsashada farxad.
Hantida FACT: Waad ku mahadsantahay aqrintayada Sababtoo ah Xaqiiqada Bixitaanka Taariikh nololeedka. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.